musha More Formula One Drivers Bio Fernando Alonso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Fernando Alonso Biography inokuudza chokwadi nezve Hudiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki (Ana Maria Diaz Martinez naJose Luis Alonso), uye Ex-Mudzimai (Raquel del Rosario).
Moreso, mumwe musikana wemumhanyi (Linda Morselli), Hanzvadzi yake (Lorenzo Alonso), Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro uye mambure akakosha.
Nyaya refu yakaitwa pfupi. Tinokuunzira mufananidzo wakazara weHupenyu nyaya yaFernando Alonso Diaz.
Iye sezviri pachena mutyairi wemujaho wekuSpain anokwikwidza Alpine muFormula One. Yedu Biography inotanga kubva pazuva rekuzvarwa kwake kusvika pakupararira kwemukurumbira wake.
Isu tinopa iyo gallery nzira yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaFernando Alonso kuti ukwidze Biography yako havi yekudya. Chokwadi, iyo foto yaunoona pazasi inopfupisa yake Yehudiki Nyaya uye Biography.
Fernando Alonso Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva paucheche hwake kusvika mukurumbira wake.
Kusvika pari zvino, vazhinji vanoona Fernando Alonso semutyairi anokurumidza uye asingachinji. Anogona kukurumidza kuwedzera kumhanya kwake kwemujaho mumamiriro ekunze ese.
Kunyangwe kurumbidza kwake, vashoma chete ndivo vakaverenga chinyorwa chipfupi nezvenyaya yake yehudiki uye Biography.
Saka nekudaro, tinokuunzira inonakidza nyaya yaFernando Alonso uye mafambiro ebasa rake remujaho. Pasina kutambisa nguva ngatienderere mberi.
Fernando Alonso Nyaya Yehudiki:
Nokuda kweBiography kutanga, Fernando Alonso Diaz akaberekwa musi we 29th waJuly 1981. Akasvika pasi pano pakanaka pakati pevhiki kuna Ana Maria Diaz Martinez uye baba vake, Jose Luis Alonso.
Mutyairi wedu weSpanish Formula one akaberekerwa muguta guru reAsturias kuchamhembe kweSpain. Zvakare, Fernando Alonso akasvika semwana wechipiri, pakati pehanzvadzi yake chete nehanzvadzi, Lorenzo.
Iye nevanin'ina vake vese vakatorwa kubva kumubatanidzwa wababa vavo, Jose Luis Alonso naamai vake, Ana Diaz, vane mapikicha atinoratidza pazasi.
Tarisai Fernando Alonso Vabereki - amai, Ana Maria Diaz Martinez uye baba, Jose Luis Alonso.
Fernando Alonso akakurira nevabereki vake nehanzvadzi muOviedo, Asturias. Baba vaAlonso, Jose Luis Alonso, vaida chitandadzo chekugovana nevana vavo. Saka, akavaka pedal kart seyechokwadi-inotaridzika diki F1 mota.
Kart pakutanga yaive yaLorena ane makore masere. Asi ipapo Lorena akakurumidza kuneta nazvo. Akanga asingafarire karting.
Naizvozvo, Alonso ane makore matatu akagamuchira kart. Akakwira neshungu mukagomba kadiki diki achibva anzwa akasununguka.
Mufananidzo wekutanga waFernando Alonso pa3.
Zvishoma nezvishoma, shungu dzaAlonso dzekumhanya dzakawedzera. Makarts 'pedals akagadziridzwa kuti atyaire zvakanaka. Pa5, mubatanidzwa wemuno wemujaho wakapa Fernando Alonso mudiki rezinesi rezinesi remujaho wekart.
Vanhu vaida Fernando nokuti aiva shasha pamitambo yese. Zvisinei, baba vake, Jose, vakamubatsira kuti arase zvimwe zvinotsausa zvishoma.
RC Celta de Vigo kirabhu yenhabvu yakapa Alonso mukana wekuva mubati, asi baba vake vakabatsira kuramba kupihwa.
Nguva pfupi mushure mekuzvarwa kwake kwechinomwe, Fernando Alonso akapinda mujaho wake wekutanga wakakodzera kart. Tarirai, ndiye akunda.
Mushure meizvozvo, pagumi, zita raFernando Alonso rakanyorwa pamikombe yakati wandei yekart.
Mushure mekuzvarwa kwake rechinomwe, Fernando Alonso akapinda mujaho wake wekutanga wakakodzera kart.
Fernando Alonso Mhuri Background:
Vabereki vaAlonso (Jose naAna) nevana vavo vaviri vaigara zvakanaka asi vakanga vasina kupfuma. Amai vaFernando, Ana Diaz, vaishanda muchitoro muOviedo.
Zvichakadaro, baba vake, Jose, vakashanda muindasitiri yezvicherwa senyanzvi inoputika.
Kubva pakutanga, Fernando akange asingagutsikane karting. Aida kukwikwidza uye kuhwina. Zvisinei, kumwe kufambira mberi kwaida mari yakawanda kupfuura yaigona kuita kuti mhuri yake ive shoma.
Fernando aiziva nzira chete yekumberi yaive yekuwana dhiraivha nekuhwina mijaho. Saizvozvi, akaramba achidaro. Naizvozvo, tinogona kuyera mhuri yaAlonso semhuri yevashandi.
Fernando Alonso Mhuri Mavambo:
Ngationei kuti yekutanga kana yebaba surname yedu yeSpanish chimiro ndiAlonso. Zvichakadaro, yechipiri, setsika yechiSpanish, izita remhuri yaamai vake, Díaz. Nenzira, Alonso zvinoreva kugadzirira kurwa muchiSpanish.
Diaz zvinoreva "mazuva." Iye zvino dzokera kumidzi yemhuri yaFernando Alonso. Fernando Alonso Díaz chizvarwa cheOviedo mudunhu reAsturias, Spain.
Zvakangodaro, Diaz inoratidzika kunge ine mavambo echiJudha, kunyangwe ichiwanzo shandiswa munyika yeHispanic.
Dzinza rake rinoratidza kuti baba vake namadzibaba ake vakamutangira vaigara ikoko.
Guta rekumusha kwake, Oviedo, rine nhoroondo yezvivakwa, ine zvivakwa zvakawanda zvakatangira panguva yekutanga medieval. Vagari vomuOviedo vakaita mabasa akawanda okuvaka.
Vakaita mapurojekiti aya panguva yekutonga kwaAlfonso II (791-842) uye Ramiro I's (842-850) kutonga.
Zvisinei, Alonso anotaura Chirungu, French neItalian, kunze kwechiSpanish. Saka nekudaro, anogona kunge aine madzitateguru anobva kumatunhu echiFrench kana echiItaly.
Mukupedzisa midzi yake yemhuri, tinoona kuti Fernando Alonso anobva kuOviedo uye mugari weSpain. Inotevera inomiririra yemifananidzo yemhuri yaFernando Alonso.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yaFernando Alonso.
Fernando Alonso Dzidzo:
Muduku Fernando Alonso akanga ari anenge 4 paakanyoresa kuchikoro. Akawana dzidzo yake paSanto Ángel de la Guarda (Chirungu: Holy Guardian Angel Primary School).
Akaita izvozvo kubva 1985 kusvika 1995 muOviedo, pasi peBasic Education System (Spanish Educación General Básica).
Kutevera nguva pfupi, Alonso akabva apinda Institute Leopoldo Alas Clarín weSan Lazaro (Spanish yeInstituto Leopoldo Alas Clarin de San Lazaro).
Asi zvino, basa rake remujaho rakaita kuti abve panguva yake Curso de Orientación Universitaria (Chirungu: University Orientation Course) muna 2000.
Ab aerial maonero eInstitute Leopoldo Alas Clarín weSan Lazaro.
Saka vakamupa mvumo yekuti adzidze asiri kuchikoro. Kunyange zvakadaro, Fernando aifarira kuenda kuchikoro.
Kashoma, haateereri mirairo yemubereki wake uye anoenda kumakirasi. Sezviri pachena, akawana kuita kwakanakisa kwedzidzo.
Mukuwedzera, pasinei nekushayikwa kwemakirasi akawanda, Alonso akapora nekuverenga mabhuku ake kumashure kwemotokari, kunyange paaifamba kumakwikwi ake emujaho.
Fernando akaramba achifambidzana nokukumbira vaanodzidza navo manotsi ezvidzidzo zvaaiva nazvo.
Fernando Alonso Biography - Hupenyu hwepakutanga (Basa reMujaho):
Alonso akatanga kumhanya kart kumatatu. Zera rakaratidza kuti rakanga risiri chipingamupinyi. Uyezve, ndiye aive mutyairi mudiki pane ese muchikwata.
Kazhinji kazhinji, akanga ari, mukuwedzera, akanakisisa. Alonso akawana kubudirira kwese munzvimbo, yenyika uye pasi rose.
Paakazosvika pakati pemakore ekuyaruka, muunganidzwa wake wemazita ekart waisanganisira makwikwi epasi rose. Pamakore gumi nemanomwe, Fernando Alonso Diaz akahwina Euro, Open by Nissan mu17.
Akabudawo wechina muInternational Formula 3000 Championship ye2000. Zvichienderera mberi, Alonso akatanga muFormula One naMinardi muna 2001 asati ajoinha Renault semutyairi webvunzo we2002.
Paakazosvika pakati pemakore ekuyaruka, muunganidzwa wake wemazita ekart waisanganisira makwikwi epasi rose.
Fernando Alonso Bio - Rwendo rwekuenda kuGlobal Fame:
Spanish Chap yakatanga kuve Formula One World Drivers 'Champion, mutyairi wetarenda risingarambike panguva yake neRenault muna 2005.
Mujaho wake wekutanga muAustralia, Alonso akatsika-tsika kubva pachikamu chechipiri nhangemutange yechitatu papodium.
Kupinda kwake padunhu remujaho nemakwikwi akatevedzana pakati pe2000s kwakapera Mick Schumacher's baba, Michael Schumacher, nguva. Mushure mezvo, akazokunda mijaho miviri yakatevedzana.
Alonso akatora ake ekutanga mazita maviri muna 2005.
Chimiro chake chisingachinji pamwe nemaitiro ake ekushinga zvakamuita mudiki weF1 shasha izvozvi. Akabudawo semudiki akahwina kaviri munhoroondo yemutambo uyu.
Takamubatanidza nezvimwe zvikwata zvakawanda, kusanganisira McLaren, Mercedes neFerrari.
Kunyangwe akahwina mamwe makwikwi kubva 2006, anoramba ari mumwe wevatyairi vanoremekedzwa, padivi paKimi Räikkönen, Lewis Hamilton, uye. Sebastian Vettel. Heino vhidhiyo yekuti 2006 Championship yakaitika sei.
Nekuda kwezviverengero zvebasa rake, chinzvimbo chake semumwe weakanakisa F1 madhiraivha enguva dzese akachengeteka.
Mushure mekupedza pechitatu naMcLaren muna 2007, Fernando akadzokera kuRenault kwa2008 na2009. Zvinoshamisa, akahwina mijaho miviri muna 2008 yechishanu.
Saizvozvo, mu2012, akahwina kuMalaysian Grand Prix uye akapedza wechitatu muMonaco. 2013 akaita semujaho wake muna 2012, asi akahwina Spanish Grand Prix ndokupedza pechipiri.
Fernando Alonso Biography - Simuka kune mukurumbira wekubudirira nyaya:
Alonso Diaz akatyaira Ferrari kubva 2010 kusvika 2014. Akapedza Sebastian Vettel mumatatu matatu akakwikwidzwa zvakanyanya mumakwikwi muna 2010, 2012, uye 2013.
Alonso akaswedera pedyo nekuhwina muHungary Grand Prix muna 2014 asi akakundwa Daniel Ricciardo.
Muna 2015, Alonso akadzokera kuMcLaren. Kunyange zvakadaro, zvakaguma nokusava neimwe kubudirira. Uyezve, muna 2018, Fernando akapedza wechishanu kuAustralia Grand Prix.
Zvakangodaro, muna Nyamavhuvhu 2018, akazivisa kuti haachakwikwidza muF1 zvakare. Akabva aenda kuIndianapolis mijaho. Nekudaro, pakubva kwake kwekutanga pamudyandigere, Alonso akange ahwina 32 Formula One Grand Prix.
Ndiye ega mutyairi weSpanish F1 kuhwina ingave Grand Prix kana World Championship. Alonso akabuda semukundi mu2001 Race of Champions Nations Cup.
Kuhwina kwaive nemutyairi werally, Jesús Puras. Zvakare, nemutyairi wemudhudhudhu, Rubén Xaus weChikwata cheSpain.
Alonso akapihwa Muchinda weAsturias Mubairo weMitambo. Moreso, iyo Premios Nacionales del Deporte Sportsman weGore Mubairo.
Zvadaro, Mubairo weGoridhe weRoyal Order yeMitambo Merit. Zvakare, akapinzwa kaviri muFIA Hall of Fame.
Muna 2021, Chikwata cheAlpine F1 chakasaina Alonso. Akanyoresa pamwe chete Stephen Ocon, neRenault yave kugadzirazve timu pasi pezita rayo idzva.
Nehurombo, mushure memujaho wake wekutanga, aifanira kuenda pamudyandigere mushure mekunge marara epurasitiki apinda mugero rake rekubhureki.
Zvakangodaro, muna Nyamavhuvhu 2021, Alonso akakumbira imwe sarudzo yekuwedzera kondirakiti yake yemwaka wa2022. Iyo clip iri pano inoratidza kufamba kwake kwepamusoro-soro kubva pabasa rake reF1.
Fernando Alonso Kufambidzana ndiani?:
Alonso akamboroorwa naRaquel del Rosario. Ndiye muimbi anotungamira weSpanish pop band El Sueño de Morfeo.
Vaviri vacho vakaroorana muna 2006. Kunyange zvakadaro, vakaparadzana muna 2011, vachitaura kuti vakaramba vari shamwari dzakanaka vachiparadzanisa sevakaroorana.
Kubva ipapo, akatora chikamu muhukama nevakadzi vana vakasiyana. Alonso akambodanana naXenia Tchoumitcheva.
Zvadaro, enderera mberi naDasha Kapustina. Ukama hwake naDasha hwakabva ku2012 kusvika ku2014. Asingaregi, Alonso akafambira mberi kuti ave naLara Álvarez.
Alonso akamboroorwa naRaquel del Rosario.
Nehukama hwake hwehukama kusvika zvino, mumwe angatarisira kuti Alonso aizotora zororo. Kunyange zvakadaro, Fernando akaramba kuita zvishoma. Akasangana nemuItaly modhi Linda Morselli muna 2016 ndokutanga kufambidzana. Zvakare, vakaparadzana muna 2016.
Imwe nguva muna 2021, Fernando paakakuvara mutsaona yemotokari, Linda akaramba ari padivi pake pachipatara. Akachengeta mhuri yake ichizivisa nezvemamiriro ake.
Nekudaro, parizvino hazvinzwi sekunge mabhero emuchato ari kuonekwa. Pasinei naizvozvo, Linda anobvuma kuti anoda kutanga mhuri. Zvisinei, iye, panguva ino, anotarisa pabasa rake.
Alonso akasangana nemuItaly modhi Linda Morselli muna 2016 ndokutanga kufambidzana.
Nezve Musikana waFernando Alonso - Linda Morselli:
Mukadzi weItaly akaberekwa musi we 15th waNovember 1988. Kunze kwekuve muenzaniso, iye munhu weTV uye ane simba.
Linda anozvirumbidza pamusoro pevateveri ve227,000 pane yake Instagram account. Akaonekwa mumafirimu akaita seThe Paramedic, anotungamirwa naCarles Torras.
Uyezve, Linda Morselli anogara kuMilan. Shamwari yake yepedyo ndiRachele Fogar (mwanasikana waAmbrogio Fogar), waanowanzo shanda pamwe chete. Muna 2006, Linda aive mumwe wemakumi matatu ekupedzisira muMiss Italia. Akahwina zita raMiss Eleganza.
Nokuda kwebasa rake, akafamba kumativi ose enyika. Uyezve, akashanda kune akati wandei anotungamira fashoni mhando uye akamiririra akasiyana mafotoshoots, edhita, akavha uye kushambadzira achishanda nevatambi vane mukurumbira pasi rose.
Linda anonakidzwa nekuita mabasa emaoko. Anoda snowboarding, skiing uye yoga (kusanganisira Bikram Yoga). Pamberi pehukama hwake naFernando Alonso, Linda aive muhukama naye Valentino Rossi.
Fernando Alonso Mhuri Chokwadi:
Panguva ino muBiography yedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yeimba yaAlonso Diaz.
Pasina mubvunzo, Alonso aisagona kuzviita, kunze kwekutsigirwa kweimba yake. Mhuri zvisungo zvinosunga F1 nyeredzi akabatsira kuumba munhu waave nhasi.
Nezve Fernando Alonso Baba - Jose Luis Alonso:
Baba vaFernando Alonso ndiJose Luis Alonso. Anotarisa baba vake zvakanyanya uye anotomutenda nekuda kwekubudirira kwake. Jose Luis Alonso nemukadzi wake, Ana Diaz, vakakurudzira vana vavo mumakwara avo ebasa.
Jose aishanda pafekitari inoputika mugodhi. Aivewo Mechanic waFernando pamazuva ake ekutamba.
Pazera remakore matatu, ngoro iyo Fernando akanga agara nhaka kubva kuhanzvadzi yake, Lorena, yainonoka zvikuru. Chaizvoizvo, Jose aifanira kufamba parutivi kuti adzore chidhiraivho.
Mufananidzo wababa vaAlonso, Jose Luis Alonso.
Jose, zvakare, aimbove mutyairi wekart amateur. Saka, ndiye akaunza adrenaline uye chido chekumhanya mumhuri.
Uyezve, vachitarisa kumashure, kupera kwevhiki kwavo kungangove kwaityisa kuna Jose nemukadzi wake, Ana.
Vaifanira kutyaira kwemaawa anosvika gumi, Fernando achiwanzorara kumashure kuti apinde makwikwi ake akasiyana-siyana.
Jose naAna vakatyaira motokari vachienda kumijaho yakasiyana-siyana ndokudzokera kumba kuti vatangezve mabasa avo. Panguva iyi, Fernando aifanira kudzokera kuchikoro kumakirasi. Chakanga chiri chibairo chikuru kwazvo.
Jose Luis Alonso nemukadzi wake, Ana Diaz, vakakurudzira vana vavo mumakwara avo ebasa.
Nezve Fernando Alonso Amai - Ana Maria Diaz Martinez:
Amai vaFernando Alonso ndiAna Maria Diaz Martinez. Hapana mubvunzo kuti Alonso anoda sei amai vake.
Ave achinakidzwa norudo rwake netsigiro mumakore ake ose okukura. Akaramba kuti basa rake remuchitoro rimuvhiringidze.
Mai vaAlonso, Ana Maria, vaitogadzira zvipfeko zvavo zvemijaho. Aibva agadzirisa size yehovhorosi yake mwana wake achikura.
Pasinei neizvozvo, Alonso aive nebasa rinovimbisa remujaho kubva paudiki. Amai vake, Ana nababa, Jose, vakajekesa kuti chainyanya kukosha kwaisava kutora mikombe. Vakamubatsirawo kuti aise pfungwa dzake pazvidzidzo zvake.
Pamwe chete nomurume wake, Ana akasimbirira kuti aizongotora rutivi mumago-karts kana akaita zvakanaka muzvidzidzo zvake. Uyezve, nerutsigiro rwemhuri yake, Alonso akabudirira muchikoro uye panguva dzemijaho yake.
Nemurume wake, Ana akasimbirira kuti Alonso aizongotora chikamu mumago-karts kana akaita zvakanaka muzvidzidzo zvake.
Nezve Fernando Alonso Sista - Lorena Alonso Diaz:
Sezvambotaurwa kubva pakutanga kweBiography yedu, Fernando Alonso anongova nemukoma. Hanzvadzi yake, Lorena Alonso Díaz.
Alonso nehanzvadzi yake, Lorena, vane ushamwari hwepedyo. Vose vane nhoroondo yakafanana uye vakadzidza zvikoro zvimwechete muguta ravo.
Mukoma waAlonso, Lorena, ndichiremba uye anoramba achitsigira mukoma wake. Iyo go-kart Alonso aimbodzidzira kumhanyisa yaive yekutanga kuna Lorena. Asi ipapo, akanga asingafariri zvemijaho. Saka Fernando akashandisa motokari yacho nounyanzvi.
Mukoma waAlonso, Lorena, ndichiremba uye anoramba achitsigira mukoma wake.
Nezve Fernando Alonso Hama:
The Spanish Formula, mumwe mutyairi, anofanira kuva nedzimwe hama. Fernando Alonso ane nhengo shoma dzemhuri kunze kwababa vake, amai uye hanzvadzi huru.
Ane vana sekuru, vana tete nana sekuru. Zvisinei, pahama dzake dzose, taigona kungoziva nambuya vake amai vamai vake, Maria Martinez.
Fernando Alonso Hupenyu hweMunhu kure neMujaho:
Kunze kwekumhanya, Alonso anofarira ice skating, gorofu, basketball, kushambira, uye kuteerera mimhanzi.
Iyo Formula one nyeredzi inoita kuti maekisesaizi akoshe. Munguva yebasa rake rekutanga, aigara achiunza ruzhinji rweshamwari dzehudiki kumijaho yeFormula One.
Saizvozvo, Alonso anodzidzisa pamwe chete nedzimwe dzeshamwari dzake. Kunyangwe zvisina kufamba zvakanaka naRon Dennis, aive zvakare neshamwari mupaddock. Mumwe wavo akanga ari mutyairi biyake, Mark Webber.
Kunze kwekumhanya, Alonso anofarira ice skating, gorofu, basketball, kushambira uye kuteerera mimhanzi.
Chinhu chimwe chete chakabatanidzwa naAlonso naWebber kwaiva kuda kwavo bhasikoro. Kunze kweCycling, Alonso anoda nhabvu. Naizvozvo, iye fan hombe uye inhengo yeReal Madrid FC.
Semunhu asingatendi kuti kuna Mwari, haatendi mune ramangwana. Vanomuziva vanopupura kuti ane claustrophobia.
Kusvika pari zvino, akafarira vateveri vazhinji kwaari. Nokudaro, anoshandisa mushonga wake wakasimba wekuti arambe aine hukama nevateveri vake.
Anowanzo taura nemhuri yake pamishonga yake yekurapa. Yake Instagram account chete ine vanopfuura 3.5m vateveri.
Fernando Alonso Mararamiro:
Mutyairi weSpanish Formula One mutambi ane hunyanzvi. Haana kungounganidza kukunda chete asiwo mari yakawanda. Saka nekudaro, panguva ino, anogona kutenga chero chinodiwa nemoyo wake.
Fernando Alonso ari pakati pevatyairi veF1 vakapfuma. Anofamba ari private Jets. Kunze kwekuve neakanakisa villa villa munharaunda yake yekuSpain, Alonso ane zvakare chivakwa chakanakisa muDubai. Ona mufananidzo wemba yake kuNorthern Spain.
Alonso zvakare ane chivakwa chakanakisa muDubai.
Iyo Champ ine mhando inoshamisa yemotokari, kunyanya mhando dzeMcLaren.
Anewo The Dashing- Maserati GranCabrio, Aprilia RS660, Honda NSX, The Godzilla- Nissan GT-R, Super Luxurious- Ferrari California uye The Elegant- Ferrari 458 Italia (inokosha $230,000).
Iye zvakare ane shoma edition Ferrari yakatumidzwa zita rake, Ferrari 599 GTB- Fernando Alonso Edition. Motokari inodhura $350,000. Heino collage yemuunganidzwa wemota yake.
Collage yemuunganidzwa wemota yaAlonso pamwe nenzendo dzake dzakavanzika.
Alonso parizvino ndiye wechishanu akapfuma Formula One mujaho, akaiswa mushure Lewis Hamilton, Don Schumacher, Eddie Jordan, uye Michael Schumacher.
Anobhenga mari inodarika madhora 32 miriyoni pagore kubva muchibvumirano chake chemakore matatu neMclaren Renault. Muna 2017, anonzi akawana $40 mamiriyoni.
Anowana bhonasi yekushanda yakakura, iyo ine simba rakanaka pamutengo wake wemari. Akatora #20 pa Forbes rondedzero yeVamhanyi Vanobhadharwa Kwepamusoro Panyika mu 2017. Maererano neForbes, mambure anokosha aFernando Alonso mu2017 aiva $ 220 mamiriyoni.
Kutsigira uye Kubatsira:
Alonso's Endorsement madhiri akawedzera mari yake yekubva-track. Akaita bhizinesi neBanco Santander, Cajastur, TAG Heuer, Europcar, Silestone, Liberbank, ING, Chandon. Moreso, neCitibank, Pirelli, uye Adidas. Anowana mari inopfuura $1 miriyoni gore rega rega kuburikidza nemadhiri aya.
Fernando Alonso Untold Chokwadi:
Chii chimwe? Pazasi pane zvishoma zvinonakidza zvimwe chokwadi nezve Oviedo-native F1 mujaho.
Kunyangwe ari mutyairi weF1, aratidza hunyanzvi hwekutsungirira mujaho nekutora chikamu muDaytona 24 Maawa uye FIA ​​World Endurance Championship.
Muna 2017, akave Indianapolis 500 Rookie yeGore. Akatyaira Andretti Autosport pachiitiko ichi.
Iye Spaniard akazove Indianapolis 500 Rookie weGore.
Alonso akaedzawo ruoko rwake pamakwikwi ekutsungirira neToyota muna 2018. Akatora kwairi sedhadha kumvura, achikunda mujaho pakuedza kwake kwekutanga. Ndiye mumwe wevashanu veF1 shasha kuhwina Le Mans.
NeToyota, Alonso akabuda akakunda paMaawa makumi maviri nemana eLe Mans kaviri (24 na2018).
Iye, nekuwedzera, akahwina iyo FIA World Endurance Championship kubva 2018 kusvika 2019. Zvakare, kuhwina 24 Maawa eDaytona naWayne Taylor Racing mu2019.
Alonso akabuda akakunda paMaawa makumi maviri nemana eLe Mans kaviri.
Nekukunda ikoko, akabatana neboka repamusoro revatyairi. Boka iri rinosanganisira Graham Hill, Phil Hill, Jochen Rindt naMike Hawthorn. Zvikuru, vese vakunda makwikwi uye F1 zita.
Kukunda Le Mans kwakaita kuti Alonso ave mutyairi wechipiri weF1, mushure meGraham Hill, kutora Crown Triple. Ivo vese vakakunda Le Mans, iyo Monaco Grand uye Indy 500.
Kunze kwekumhanya, Alonso anosanganisira mufashoni brand Kimoa. Ndiye muvambi wekudyara mune fashoni brand Kimoa, iyo yakatanga muna 2017.
Kimoa imhando yemararamiro anotengesa T-shirts, Shirts, Surfboards, Skateboards. Moreso, vanotengesa zvinhu zvakafemerwa neCalifornia kunyura kwezuva nemahombekombe. Kimoa ndiye zvakare ari pamutemo surfwear shamwari yeMclaren F1 timu.
Alonso anosanganisira mufashoni brand Kimoa.
A Mujaho eSports timu:
Alonso zvakare muridzi weFA Mujaho. Icho chikwata cheSports chinokwikwidza mune dzakasiyana F1-based eSports zviitiko.
Chikwata cheSports chakatanga naMcLaren anotsigira Logitech. Iyo Spanish F1 nyeredzi yemujaho, mukuwedzera, inomhanyisa timu yejunior mijaho.
Sekureva kwaAlonso, eSports inguva yemberi, uye chero munhu ane tarenda rakakwana kuseri kwevhiri ane pfuti yekuve chikamu chechikwata chake.
Iyo Spanish Samurai zvakare mumiriri weUNICEF Wenyasha. Alonso akatanga iyo Fundacion Fernando Alonso (Chirungu: Fernando Alonso Foundation) muna 2007 kushambadzira mijaho yemotokari uye dzidzo yekuchengeteka mumigwagwa. Akatsigira chirongwa cheUNICEF chekurwisa cyberbullying muna 2017.
Fernando Alonso ane zvakare karting institution. Anodzidzisa nekurera matarenda evadiki mumijaho. Chikoro ichi chinonzi Fernando Alonso Karting Chikoro.
Fernando Alonso ane zvakare karting institution, kwaanorera matarenda evadiki emujaho.
Fernando anowana mazana ezviuru zvemavhidhiyo nemapikicha anotorwa paari gore rega rega. Pakange pasina nzira yekuti arambe achitevera mafoto ese nemavhidhiyo. Asi nekuwana KODAKOne, kune rugare rwepfungwa.
Sezvo mifananidzo yake yese nemavhidhiyo zvakachengetedzwa munzvimbo imwechete. Saizvozvo, iyo F1 Champion Fernando Alonso Inofambisa Yese Dhijitari Raibhurari kune Kodak Blockchain.
Chibvumirano chaAlonso neWENN Digital chinobvumira Alonso's fanbase yepasi rose kuwana KODAKOne Platform. Ichavagonesa kuti varege kurodha chete, kunyoresa uye kuchengetedza mafoto avo nemavhidhiyo evanofarira F1 mutyairi.
Mukuwedzera, mumwe munhu aizovapawo mubairo wekuita saizvozvo mune zvimwe zviitiko. Fernando Alonso achave mumwe wevatambi vekutanga anozivikanwa fambisa raibhurari yake yedhijitari kune blockchain.
Muna 2012 Alonso akaita tattoo mukukudza Hagakure. Akaisa pateni nemusana wake. Tattoo yaAlonso inoratidzira Samurai kuratidza simba remhasuru, hungwaru uye simba rekuda rakafemerwa negwara remweya wezana ramakore rechi 18, Hagakure.
Iyo Fernando Alonso museum:
Ane mukurumbira anonzi 'Spanish Samurai', Fernando Alonso anewo museum yakatsaurirwa kune yake F1 basa uye rwendo.
Iyo Museo y Circuito Fernando Alonso yakavhurwa muna 2015. Iyo museum ine zvinhu zvinopfuura mazana matatu kubva kuAlonso's racing career. Zviri mukati maro zvinosanganisira ruzhinji rwemota dzake, ngowani uye mikombe, pamwe nekarting circuit yaakazvigadzira.
Semumwe wevakapfuma Grand Prix mujaho wakatenderedza, anofunga kuti museum idiki zvakanyanya. Naiye ave kuda kudzokera kuF1, akapa mari inosvika madhora mazana matatu ekuwedzera museum.
Fernando Alonso Tsaona:
Mhare yenguva mbiri yenyika Fernando Alonso akapinda mune a tsaona yemumugwagwa paunenge uchichovha bhasikoro muSwitzerland.
Sekureva kwechikwata chake cheAlpine, muSpaniard, mushure mekusavapo kwemakore maviri, anoziva uye ari maari. Zvisinei, aizoongororwazve nachiremba.
Zvakare, masosi anoti mota yakamurova pedyo neimba yake yeLugano. Kusvika pari zvino, akatyoka shaya. Nokudaro, Alonso angave ari muBern ane chikwata chenyanzvi kubata nekukuvara kwakadaro.
Fernando Alonso Biography Pfupiso:
Ivo vanowanzo tora Alonso semumwe weakanakisa Formula One mutyairi munhoroondo yemutambo.
Nerutsigiro rwemhuri yake, Alonso akabudirira. Ndiye F1 mutyairi anotengeswa zvakanyanya. Nguva yake yekutanga "kiyi", anodaro, aive achihwina mumakwikwi enyika yeSpain muna 1994.
Sezvineiwo, kune flip kuburikidza naFernando Alonso Biography uye Childhood Nyaya, isu takamboda zvese zvaungada nezvake.
Yake Networth, zera, kureba, uremu, Ex-mukadzi, Musikana, vabereki, hanzvadzi, hama, kusimuka mukurumbira uye nhoroondo inounganidzwa mutafura iri pazasi.
Zita rizere: Fernando Alonso Díaz
Zita rekudanwa: Mashiripiti Alonso, El Nano, Spanish Samurai
Zuva rekuzvarwa: 29th Zuva raJuly 1981
Nzvimbo yekuzvarirwa: Oviedo, Asturias, Spain
Basa: Spanish racing driver (formula one)
2021 timu: Alpine-Renault
Nhamba yemotokari: 14
Mapinda: 331 (328 kutanga)
Makwikwi:	 2 (2005, 2006)
Dzidzo: Santo Ángel de la Guarda uye Institute Leopoldo Alas Clarín weSan Lazaro.
Baba: José Luis Alonso
Amai: Ana Maria Diaz Martinez
Sisters: Lorraine alonso
Hama: Maria Martinez (ambuya amai)
Mumwe: Raquel del Rosario (m. 2006–2011)
Musikana: Linda Morselli
Hobbies: Ice skating, bhasikoro, gorofu, basketball, kushambira uye
kukwirira:	 5 ft 7 mu (1.71 m)
Muhoro: $ 40 Million
Social Media: fernandoalo_official (instagram)
Sezvatinotenderedza Fernando Alonso's Biography uye Nyaya yeHupenyu Hwehuduku, ndinofungidzira kuti unogona kutora zvidzidzo zvishoma. Chero zvaawana kusvika parizvino pakanga pasina kukanganisa. Nzira yake yehupenyu ihope, yakanyatsosarudzwa uye inoteverwa.
Apo Alonso akanga ari pamusoro pe10 kusvika kumakore gumi nemashanu, akanga ane mufananidzo weAyrton nemotokari. Ayrton aive mutyairi wemujaho weBrazil F15 akahwina Mukwikwi weFormula One World Drivers 'Championship muna 1, 1988 na1990.
Sekudaro, pese paanovhura gonhi kuti atore mbatya dzake, kanenge kari kekutanga kuona. Nguva refu gare gare, aive kuSuzuka naMcLaren uye akarangarira mufananidzo wacho.
Hope dzacho dzakanga dzave chokwadi. Parizvino, chiroto ichi chinoenderera, uye chimiro chake chisingachinji uye chimiro chekushinga chamuita mudiki weF1 shasha.
Parizvino, mukurumbira wake unomuendesa akadaro Amazon yakagadzira Documentary Series kwaari. Tinovimba unonyoresa kune zvimwe biography chokwadi chine kuverenga kunonakidza.